Fikambanana Assanati Famo Gidraka: Tsy nanadino ireo mpiara-miasa aminy
lundi, 11 septembre 2017 08:56
Nahatsiaro manokana ireo mpiara-miasa aminy rehetra eto Mahajanga ny filohamboninahitra sady mpanorina ny fikambanana Assanati Famo Gidraka, ho fankasitrahana azy ireo tamin'ny fiaraha-miasa nisy hatramin'izay, ka nampahomby ny hetsika ara-tsosialy rehetra nanampiana ny zanak'i Mahajanga.
Samy notolorana fanomezana avokoa araka izany ireo lehiben'ny sampan-draharaha voakasika tamin'ny alalan'ireo mpitarika ny fikambanana eto an-toerana. Nahazo ny anjarany ny Prefen'i Mahajanga, Ravelomahay Lahiniaina Fitiavana, ny Lehiben'ny faritra Boeny, Saïd Ahamad Jaffar, ny kaomisera Ramananandro Gabriel, lehiben'ny Commissariat Central, ny filohan'ny TVHFB, Abdallah Rosalie, ny filohan'ny tambazotra miaro ny zon'ny mpanjifa eto Mahajanga, sy ny maro hafa.
Fiaraha-misalahin'ireo sampan-draharaha maro samihafa, indrindra ireo manakaiky ny vahoaka no anisan'ny mampahomby ny asa ataon'ny fikambanana ary mitondra fampandrosoana, hoy ny filohan'ny fikambanana Assanati Famo Gidraka.
Hetsika nahitana azy ireo farany teo ny fanolorana omby araka ny fombandrazana nandritra ny Fitampoha teny amin'ny Doany Miarinarivo efa-dahy manankasina. Teo ireo hetsika fanampiana ny fianakaviana sahirana eto Mahajanga, nahafantarana ny fikambanana hatramin'izay ary ny asa fanadiovana fanaon'ireo mpikambana.
Samy nankasitraka tamin'ny fanomezana azony avokoa ireo olobe nahazo izany ary samy nanamafy fa mbola vonona hanohy ny fiaraha-miasa amin'ny Assanati Famo Gidraka. Tanjona iray no iraisana dia ny fanampiana ireo mpiara-belona araka izay azo atao.
what is cialis for men natural cialis
[url=http://angelicconnectionmatchmaker.com/members/waterepoch5/activity/59304/]best price on prescription drugs[/url]
lundi, 11 décembre 2017 17:12
cialis for daily use cost viagra without a doctor prescription from canada
[url=http://cryptogauge.com/members/sheepsoil2/activity/297654/]how to get cialis without a prescription[/url]
lundi, 11 décembre 2017 01:51
cialis for sale online tadalafil
dimanche, 10 décembre 2017 18:12
costco pharmacy canada prescriptions
mercredi, 06 décembre 2017 14:26
mercredi, 06 décembre 2017 03:09
mardi, 05 décembre 2017 21:46
lundi, 04 décembre 2017 02:12
herbal remedies for asthma spinal arthritis
samedi, 02 décembre 2017 13:19